Talooyin iyo tabaha si qoortaada loogu diiriyo qaab jiilaalkan | Ragga Stylish
Saddex siyaabood oo qoortaada loogu diiriyo qaab ahaan maalmaha qabow
Tan iyo inta lagu jiro xilliga qaboobaha waa aad muhiim ugu ah kahortaga hargabka iyo ifiladaMaxaa diidaya in qaabka loo sameeyo? Waxaan ula jeednaa diirinta qoorta.
Kuwa soo socdaa waa seddex qaab oo ku caawin doona u fiirso muuqaal qoortaada ha ahaato mid diiran oo ilaalinaysa Laga soo bilaabo qabowga iyo waxyeelada dabaysha jiilaalka:
1 Qoorta funnel + qoorta dhaasha
2 Shaati + turtleneck
3 Maro guntin guntin
Qoorta funnel + qoorta dhaasha
Abuur laba lakab oo difaac ah qoortaada adoo ku siinaya qoorta qulqulka qoorta oo ka boodbooda boodboodka qolfada. Isku dhafkan waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso garbasaar la'aan haddii dabayshu aad u xooganayn. Qeybta hoose waxaad ku xiran kartaa surwaal dhar ah, shiino, joonis iyo xitaa joggers ... iyadoo kuxiran waxa munaasabaddu u baahan tahay.
Shaati + turtleneck
U beddel funaanad-qoorta funaanad shaati ah (waxay noqon kartaa dhar ama badhan-hoose) muuqaal caadi ah oo casri ah. On top waxaad isticmaali kartaa jaakad classic ama hel xafiis diyaar ah oo leh blazer.
Maro guntin guntin
Si aad u diiriso qoorta, tan ugu wax ku oolka ahi waa maro. Ujeedadaas darteed ayaa loo alifay. Waxaa jira siyaabo badan oo loo xidho, laakiin haddii aad rabto inaad diirimaad noqoto iyo sidoo kale muuqaal leh, in yar ayaa ka sarraysa guntiiga siibka ah. Qaabkan wuxuu u shaqeeyaa sidii soojiidasho muuqaal dabacsan iyo mid caqli leh labadaba. Oo weliba waa mid aad u fudud, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Isku laab masarka qeybtii (si looga fogaado dharka maqan, hubi inuu yahay maro afargeesle ah oo uusan aheyn mid laba jibbaaran).
Sudh shaati qoortaada sudhan si darfihiisa uga laalaadaan laabtaada.
Si aad u fuliso gunda boodhka ah, u dhaaf labada daraf ee dabacsan marinka loo abuuray qaybtii aad ku duubtay masarka.
Si fiican loo hagaajiyay, guntikani wuxuu ilaaliyaa qoorta oo dhan maalmaha qabow. Hubso in gunti xuddun u tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Saddex siyaabood oo qoortaada loogu diiriyo qaab ahaan maalmaha qabow
Talooyin ku saabsan helitaanka qaabkaaga shaqsiyeed